Nhau - Vietnam Miza 4800/550 Multi-waya bepa muchina wakabudirira kutanga uye kumonera.
Musi waApril 28, 2021, Vietnam Miza 4800/550 Multi-waya bepa muchina wakabudirira kutanga uye kumonera.
Chibvumirano cheichi chirongwa chakagumiswa munaKurume, 2019 uye zvese zvigadzirwa zvakaendeswa pamutengi wevatengi muna Sep. Gare gare, nekuda kwedenda, chirongwa ichi chakaiswa asid kwemwedzi yakawanda. Sezvo denda rakamuka rakadzorwa, tinotangazve kugadzirwa nenzira yakarongeka. Nekuda kweiyo yakawanda uye inobudirira nhomba yekurwisa hutachiona, nyanzvi yedu inofamba rwendo rurefu kuenda kuHanoi kunoisirwa.
Makorokoto kuMiza, Vietnam neHuazhang Technology, mukuru wekontrakta weprojekiti.
Iyi pepa muchina urikugadzira Kraft Pepa ine yakagadzirirwa dhizaini ye550m / min uye kureba kwe4800mm. Kune iyo nyoro yekutsveta, SICER anotora chikamu mukugadzira, kugadzira uye aftersale kuisa kuti uve nechokwadi chekutangisa kutanga. Uye iro rakabudirira mashandiro eprojekti rinopa chivimbo chakanyanya kune yekunze 'chirongwa chose. Kunze kweiyo Thuan chirongwa chiri kumaodzanyemba kweVietnam, chirongwa ichi chine kukosha kwakanyanya munzvimbo yekuchamhembe kweVietnam.
Tese takamira, hushamwari hwekutengesa nyika mbiri idzi hahuzombodzikira. Ngatiteedzerei danho reiyo Imwe Bhandi Imwe Nzira uye nekudzamisa kubatana mune ramangwana.